२४ चैत्र २०७५, आईतवार १४:०५
२३ चैत काठमाण्डौ : भर्खरै बारा र पर्सामा आएको भयानक आँधी टोर्नाडो भएको वैज्ञानिक पुस्टि भएको समाचारहरु बाहिरिएका छन् । उक्त आँधीले धेरै क्षति पनि गर्यो । सायद नेपालको इतिहासमै यो पहिलो विनाशकारी शक्तिशाली आँधी पनि हुन सक्छ । यो आँधीले त बारा र पर्सामा मात्र क्षति गर्यो । तर, अब नेपालभर एउटा अर्को विपद आएको छ जसले देश नै नरहने अवस्था श्रीजना गरेको छ । हेरौं यस्तो छ नेपाल नै सक्ने घरि आएको विपद जसको सामना नगर्ने हो भने अब साच्चिकै नेपाल सक्किन पनि सक्छ ।
विवादास्पद नागरिकता विधेयक विचारधीन रहेको अबस्थामा ७७ वटा नै जिल्ला मा उर्दी जारी गरी नागरिकता विधेयक पारित नै भएको जसरि जारि गर्नको लागि २०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटा नै जिल्लामा पत्र पठाएको छ । वास्तवमा पारीत नै नभएको विषयलाई यसरि पत्राचार गरेर उर्दी नै जारि गर्नुपर्ने हतार किन पर्यो ? आउनुहोस यसको चिरोफारो गरौँ र यो विधेयक पश्चात देश कता पुग्छ त्यसको केहि मुल्यांकन पनि ।
वास्तवमा नेपालमा वम्सज नेपालीको भन्दा अंगिकृत नागरिकको संख्या बढाउने खेल गणतन्त्रको उदयभन्दा पनि पहिलेबाट सुरु भएको हो । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र कै पालामा नागरिकता विधेयक पारित गर्न दरबार माथि दबाब आएको थियो । राजसंस्था त्यतिबेला देशप्रति बफादार बनिदिदा यसैको बाधक बनेको सजाय स्व राजा विरेन्द्रको वंश पुरैले भोग्नुपर्यो । तर, यो एउटा मात्र कारण नभई अन्य थुप्रै विदेशी पश्चिमा र इन्डो स्वार्थहरु पनि दरबार हत्याकाण्ड भित्र लुकेका थिए ।
दरबार हत्याकाण्ड पश्चात राजा बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि ति स्वार्थहरू पुरा हुन नसकेपछि गणतन्त्र नेपालमा स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना हुनासाथ देश कमजोर बनाउने खेलमा वाधक बनेको राजसंस्था र हिन्दु राज्य दुवैलाई प्रभुकै इक्षामा र जनमत विना नै हटाईयो । हिन्दु राज्य नेपालमा हटाउदा अधिकांश हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको भारत यो विषयमा कडा रुपले यसको विरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्थ्यो तर त्यसरी प्रस्तुत नहुने पश्चिमा र भारतको पूर्व सहमति अनुसार भारत पनि यो विषयमा चुपचाप बसिदियो । यस भित्र पश्चिमा र भारतको संयुक्त स्वार्थ लुकेको थियो ।
भारतको स्वार्थ नेपालको तराइ भूमिलाई भारतको स्वार्थमा प्रयोग गर्नु थियो तथा पश्चिमाहरुको र भारतको संयुक्त स्वार्थ भने नेपालमा अराजक स्थिति श्रीजना गराई यहाँ बसेर चिन विरुद्ध गतिविधि बनाईरहनु र चिन विरुद्ध खेल्नु थियो । यसै भित्र पश्चिमाको अर्को स्वार्थ इशाईकरण फैलाउनु पनि रहेको थियो । यहि उद्देश्यहरुको गोटी बनेर हाम्रो देशका कम्युनिस्ट र कांग्रेस लगायत ठुला दलहरु पहिल्यै देखि नै विदेशीबाट परिचालित थिए । यहि उद्देश्य प्राप्तिका लागि पश्चिमा शक्तिहरु र भारत विच सहमति नै भएको छ । यहि मिसन अनुसार नै भारत र पश्चिमाको दबदबा नेपालको राजनीतिमा सधै रहने गरेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना पश्चात देश कमजोर बनाउन अनेकन प्रयास भए । प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा ,ओली लगायत नेताहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्दा सेना , न्यायालय , सुरक्षा निकाय अनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुराहरु विवादीत बनाइए । अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक कटीसक्दा न्यायालय , सुरक्षा निकाय , कर्मचारी , नागरिक समाज आदि जस्ता देशका प्रमुख अंगहरु सबै नै पूर्ण रुपमा राजनीतिकरण भैसकेका छन् र यी सबै अब उही भारत र पश्चिमाको नीति पुरा गर्न नेताहरु सरह परिचालित पनि छन् ।
नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित वा लागु हुदा नेपाललाई फिजीकरण गर्न भारतलाई निकै सजिलो हुन्छ । त्यस्तै , इशाइकरण देशमा फैलाएर र जातीय द्वन्द फैलाएर यहाँ विवाद मच्चाउदा पस्चिमालाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यो दुवै रणनीति पुरा गर्न खोजिरहदा देशका पक्ष , प्रतिपक्ष , न्यायालय , सुरक्षा निकाय सबै मौन छन् किनकि अब यी सबै परिचालीत छन् ।
नागरिकता विधेयकले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छः
अंगीक्रीत नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउनु एकदम गम्भीर र गलत कुरा हो । संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यसरी ‘सर्कुलर’ जारी गर्नु अत्यन्तै शंकास्पद पनि हो । यो सबै वंशज नागरिकलाई अल्पमतमा बनाएर आगन्तुकहरुलाई बहुमतमा पार्ने नीति हो । यहि एउटा नीतिले अंगीक्रीतका सन्तानलाई देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो समेत खोलिदिने छ ।
खुला सिमाना रहेको भारतमा एक सय करोडभन्दा धेरै जनसंख्या छ । त्यहाँको एक प्रतिशत मान्छे नेपालमा आउँदा पनि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा ठूलो समस्या उत्पन्न गर्छ । नेपाल फिजिकरण हुन सक्छ । सिक्किमीकरणमा जान सक्छ ।
यसबाट आफैं बुझ्न सकिन्छ कि यो कत्तिको घातक छ । यहि अवस्थामा अब देश जाने हो भने देशमा सिधै विदेशी सासन र विदेशी बहुमत हुनेछ र देशको अस्तित्व नै समाप्त समेत हुन सक्छ । यो सिधै बिदेशीको हातमा देश बुझाइएको हो ।
सरकारले अन्तरिम संविधानमा नागरिकता ऐन ल्याएको थियो । पहिले त्यसलाई यथाशीघ्र खारेज गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानलाई टेकेर त्यस बेला नै ४०–५० लाखलाई नागरिकता दिइएको छ । त्यस बेला वितरण गरिएको नागरिकता सबै खारेज गरिनुपर्छ । भारतले नेपाली चेलीलाई १५-२० वर्षसम्म पनि नागरिकता दिदैंन तर हामीले चै किन हतारिएर भारतीलाई नगारिकता दिनुपर्ने ? विदेशी ज्पाइँ र बुहारीलाई नेपालमा नागरिकता खोज्नुको कारण के हो ? यसमा किन एन जी ओ समेत संगै संगै लागेका छन् ? यसको केवल एक उत्तर छ , नागरिकतामा एनजिओहरूको समेत निहीत स्वाथ लुकेको छ । नेपालको राष्ट्रयता र नेपाली समाज तथा संस्कृतिमा उनीहरूले नागरिकतामार्फत बिग्रह ल्याउन चाहन्छन् ।
तसर्थ , अब यो विधेयक सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरु मिलेर असफल पार्नुपर्छ नत्र यो देशको अस्तित्व नै रहने छैन । बिदेशी कृपाबाट परिचालित यो व्यवस्था र यो तन्त्र नै उखेल्न परे पनि पछी पर्नु हुदैन । सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्छ । अबको एक मात्र विकल्प भनेको सेना र राजाको संयुक्त साशन हुनसक्छ तर पहिले सबै देशघाती नेताहरु र नेताका भरौटेहरुलाई जेलमा जन्मकैद कोच्नुपर्छ ।
तपाइँलाई यो लेख कस्तो लाग्यो ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला